Qasriga Zafra | Wararka Safarka
Maria | | Magaalooyinka Spain, Getaways
Sawir | Diego Delso Wikipedia
Waxay ku taal meel cidlo ah oo ka tirsan degmada Campillo de Dueñas, oo ku taal gobolka Guadalajara, Qalcadda Zafra waxay si weyn ugu taagan tahay dhagax weyn. Qalcaddii qarnigii XNUMXaad oo door muhiim ah ka ciyaartay intii lagu jiray Isbayntii Isbaanishka maadaama ay kala badh u dhaxaysay boqortooyooyinkii Aragon iyo Castile.
Si kastaba ha noqotee, dadweynaha guud way ogyihiin iyada oo ay ugu mahadcelinayaan taxanaha "Game of Thrones" maadaama ay ahayd meeshii loo doortay inay matalaan Tower of Joy, oo ah meeshii uu ku dhashay Jon Snow.
Midkoodna maxaa yeelay waxaad jeceshahay taxanahan khiyaaliga ah, maxaa yeelay waxaad jeceshahay qalcadihii qarniyadii dhexe ama labada sababoodba, xagga hoose waxaan ka baran doonnaa wax badan oo ku saabsan taariikhda mid ka mid ah qalcadaha ugu quruxda badan Guadalajara.
1 Waa maxay taariikhdeeda?
2 Sidee loo tagaa Qasriga Zafra?
3 Waa maxay booqashooyinka kale ee lagu sameeyo gobolka Molina-Alto Tajo?
3.3 Beerta Dabiiciga ah ee Alto Tajo
Waa maxay taariikhdeeda?
In kasta oo ay jiraan hadhaagii hore, haddana waxaa la dhihi karaa taariikhda Qasriga Zafra waxay ka bilaabmaysaa duulaankii Visigoth ee Jasiiradda Iberia, markii askari reer Gothic ah uu ka qaaday fagaarahan reer Rooma oo markii dambena qalcaddan ka dhistay bartamaha Sierra de los Castillejos.
Markii dambe dhismuhu wuxuu ku dhacay gacanta muslimiinta markii King Alfonso I el Batallador uu soo ceshaday, waxay ahayd markay lahayd waqtigeedii quruxda badnaa. Laga soo bilaabo qarnigii 500aad waxay leedahay muuqaalkeeda haatan waxaana loo maleynayaa inay martigalisay ilaa XNUMX oo askari intii lagu jiray qarniyadii dhexe.
Qasriga Zafra wuxuu kaqeyb qaatay cutubyada muhiimka ah ee taariikhda Isbaanishka sida go'doominta Gonzalo Pérez de Lara, Lord of Molina, oo ay geysteen ciidamadii Boqorka Castile Fernando III el Santo, oo iyagu ku caasiyoobay boqortooyada. Tan iyo markii ay ahayd lama taabtaan oo ay qaadi kari waayeen qalcaddii, boqorku wuxuu ku qasbanaaday inuu ku heshiiyo "Concordia de Zafra", kaas oo markuu dhinto Don Gonzalo magaalada Molina de Aragón ay ka mid noqon doonto taajkii Castile.
Midowgii boqortooyooyinkii Aragon iyo Castile kadib, qalcaddii Zafra waxay lumisay muhiimada istiraatiijiyadeed waxayna lalowday qarniyo badan. Tan macnaheedu waxa weeye inay sii xumaatay qaab-dhismeedkeedii oo ku dhammaaday muuqaalkeedii asalka ahaa illaa 1971, iyadoo dadaalka hal deris, Antonio Sanz Polo, ay suurtagal noqotay in dib loo dhiso qeyb ka mid ah derbiga, munaaraddii Homage iyo munaaraddii Poniente ee ku duugneyd dhagaxa weyn, sidaasna ku soo celinaysa qalcaddan weyn xilliyadeedii quruxda badnaa.
Hadda waa mid ka mid ah tusaalooyinka ugu wanaagsan ee qalcadda dhagaxa ah ee lagu keydiyey Spain oo dhan, laakiin gudaha lama booqan karo maxaa yeelay waxaa iska leh awooweyaasha Antonio Sanz Polo.
Sidee loo tagaa Qasriga Zafra?
Qasriga Zafra ma laha marin fudud maadaama lagu maro wadooyin beeraha ka mid ah oo aan calaamadeyn oo dhagxaan ka buuxo halkaasoo baabuur kaliya uu sida caadiga ah ka gudbo waqti ka waqti. GPS ayaa loo baahan yahay si loo helo loona helo qalcadda si fudud oo qaraabo ah.
Waxaa jira laba siyaabood oo aad ku tagi karto Qasriga Zafra. Laga soo bilaabo wadada GU-417 ee isku xirta Pobo de Dueñas iyo Campillo iyo magaalada Campillo de Dueñas.
Waa maxay booqashooyinka kale ee lagu sameeyo gobolka Molina-Alto Tajo?
In kasta oo dad badani u yimaadaan meeshan si ay u arkaan Qalcadda Zafra oo keliya, maaddaama safarku dheer yahay oo ay adag tahay in marin loo helo, waxaan kugula talinayaa inaad ku dhammaystiraan booqashada qaar ka mid ah khasnadaha uu gobolkani ku leeyahay hareeraha.
Waa mid ka mid ah magaalooyinkii ugu qadiimiga badnaa ee Isbaanishka oo leh buundadii hore, kaniisaddeeda, rubucdeeda Yuhuudda iyo makhaayado wanaagsan oo aad ku raaxeysan karto cunnada Castilian-La Mancha. Intaas waxaa sii dheer, waxay kaloo leedahay mid ka mid ah qalcadihii ugu yaabka badnaa uguna weynaa Spain ee loo yaqaan qalcadda Molina de los Condes. Ha moogaan!
Waa marin biyood qulqulaya oo lagu xardhay Wabiga Gallo oo ku yaal dhererka magaalada yar ee Corduente, taas oo qayb ka ah Beerta Dabiiciga ah ee Alto Tajo.
Beerta Dabiiciga ah ee Alto Tajo
Beerta Dabiiciga ah ee 'Alto Tajo Park' waxaad ka heli doontaa Spain aan la aqoon oo leh muuqaal qurxoon oo leh buundooyin, lagoonno, dooxooyin, monoliths, aragtiyo, waddooyin dhaadheer iyo guryaha miyiga ah ee magaalooyinka soo jiidashada leh sida Cobeta, Poveda de la Sierra, Checa ama Zaorejas.)
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Magaalooyinka Spain » Qasriga Zafra